Sénégal : Tondradrano Mamono Olona 18 Sy Mangihy Ny Firenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Aogositra 2012 14:04 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, বাংলা, Ελληνικά, Aymara, Filipino, Français
Ny 26 Aogositra 2012, niteraka tondradrano mahatsiravina ireo oram-be nivatravatra tamin'ny faritra maro tao amin'ny firenena. Ny fanisàna dia nahitàna maty niisa 18 ary naratra 42. Napetraky ny goveremanta senegaly ny Drafitra Vonjy taitra (Orsec )mba hamonjena ireo tra-boina. Ireo senegaly mpikirakira aterineto dia manoritsoritra ny vokatry ny tondradrano any amin'ny faritra misy azy avy.
dikasarin'ny fàfana tamin'ny tondradrano tao Dalifort noraketin'i Diopweb
Marobe ireo mpikirakira aterineto no nampakatra saripika sy lahatsary tety anaty tambajotra sosialy momba ny fahavoazana naterak'ireo orambe nivatravatra.
Ilay bilaogera/mpanao gazety Basil Niane dia nampakatra lahatsary fanadihadiana marobe ao amin'ny YouTube, avy any amin'ireo tanànan'i Dakar niharan'ny tondradrano. Ao anatin'ny lahatsary eto ambany, ny zava-misy ao an-tanànan'i Grand Yoff no soritsoritany :
ilay bilaogera Diopweb dia nanao toy izany koa ho an'ny tanànan'i Dalifort & Maristes :
Anna Gueye dia nanao fanambatambarana ireo saripika nanamarika indrindra nivoaka tao amin'ny twitter.
Claude André Coly mitantara ireo fahasahiranana sedrain'ny mponina any amin'ny faritra hafa :
Any amin'ny tanàna izay nahitàna loharanom-baovao mitatitra fa hoe nanakaiky ny 140 mm ny haavon'ny rotsak'orana voaray ny alin'ny Alahady teo, an'arivony ireo tra-boina. Ny tanànan'i Sourah, Keur Niang, Darou Miname, Gare Bou­ndaw, Ndame sy Darou khoudoss no tena voa mafy. Tsy afa-bela tamin'izany hatramin'ny Maoske Lehibe, tafiditry ny rano hatrany anatin'ilay tranobe, izay niteraka fahavoazana noho izany.
Rava tanteraka ny trano fiasàna iray fanodinana hazo tao khaïra noho ny afo nateraky ny herinaratra. Trano fiompiana akoho iray tao an-tsenan'i Ocass izay nisy akoho 800 no lasan'ny rano ihany koa [..] Tao amin'ny kaominin'i Mbacké ihany koa, ny tanànan'i Pallène, Gawane, Route de kaël sy Escale dia dibo-drano. Hatramin'ny Taïf izay nahazo rotsak'orana 149,6 mm.
Mpikirskira aterineto marobe ihany koa no namoaka an-tsary tao amin'ny twitter ny fahavoazana :
Fiarakodia mitsinkafona eny ambony rano tao #OuestFoire. #kebetu twitter.com/damndiaye/stat…
RT @diopweb: Fihoaran'ny rano tao amin'ny farihin'ireo ‘Maristes’ yfrog.com/h3kbqbfij #Inondation26Aout #Dakar #Kebetu #Senegal
Eo am-pahitàna ny fahavoazana, nampiato ny fitsidihany tany Afrika atsimo ny filoha Sall. Nanao fihetsiketsehana tao Dakar hanoherana ny fahataran'ireo fepetra noraisin'ny manampahefana ireo mponina tra-boina. Nampiasaina ny entona mandatsa-dranomaso mba hanaparitahana ireo mpanao fihetsiketsehana. Manazava ny tsy hafalian'ny mponina i Malickou Ndiaye :
Trano rava, rindrina mirodana, ny hopitalin'i Philipe Maguilène Senghor de Yoff tondraka, nitarika fanesorana ireo marary, làlana tapaka ; mitsobotsoboka etsy sy eroa. Avy ao Yoff mandalo an'i Grand-Yoff, Parcelles voajary, Khar Yalla, tsy mahafinaritra velively izay hitan'ny maso. Toe-javatra sarotra faritana izay nanosika ny mponina hidina na-dalambe, mba haneho ny hatezerany. Nandoro kodiarana ny mponina, satria, raka ny nolazain-dry zareo, tsy nanao ezaka na kely akory aza ny manampahefana mba handritàna ny rano.